Ọbịa ịde blọgụ - You're na-eme ya na-ezighi ezi | Martech Zone
N'otu oge, backlinks chịrị ụwa nke njikarịcha search engine. Mgbe a tụrụ ogo saịtị dị na PageRank, backlinks nyere ọtụtụ votu a na-achọkarị nke mere ka metrik a. Mana dị ka algorithm nke Google tozuru etozu, ogo weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị ezu ike ọzọ na ọnụọgụ nke njikọ ndị na-egosi ya. Ogo nke saịtị nnabata njikọ ahụ malitere iburu ibu karịa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke njikọ saịtị nwere ike inweta.
Nke a mere ka omume ide ederede blọọgụ ndị ọbịa maka saịtị ndị ọzọ. The azụmahịa bụ kama isi; ị na-enye weebụsaịtị na ọdịnaya ha na-enye gị backlink. Ma, dị ka ọtụtụ usoro njikọ njikọ ndị ọzọ, mmekpa ahụ na-abanye blọgụ ndị ọbịa. E guzobere weebụsaịtị na enweghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ịnabata akwụkwọ ndị ọbịa, saịtị na-ebo ndị mmadụ ebubo ka ha biputere isiokwu ha, ndị mmadụ na-ede akwụkwọ ozi ndị ọbịa rụpụtara ihe na-abaghị uru, na ịmegharị isiokwu ghọrọ ụkpụrụ. Ọ bụ naanị oge tupu Google gbawara ọzọ ma malite nyocha nke usoro njikọ njikọ a.
Mgbe a wepụtara mmelite Penguin, ebutere ụzọ dị iche iche nke ndị ọbịa na-eche ihu. ọtụtụ ndị were nke a ịpụta na ịde blọgụ ndị ọbịa abụkwaghị atụmatụ bara uru ebe ọ bụ na a na-ata ọtụtụ saịtị ahụhụ n'ihi omume ịde blọgụ ndị ọbịa.
N'ihi ya, ụfọdụ azụmaahịa hapụrụ nzipu ndị ọbịa kpamkpam, n'ihi na ha nọ na-eche na njikọ adịghịzi mkpa. N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị ihe niile na-adịghị mma ị nwere ike ịnụ banyere mmetụta backlinks nwere na mbọ SEO gị, ha ka dị mkpa. N'ezie, ha dị ọtụtụ. Dị ka Searchmetrics 2013 Ihe ndị na-enyere gị aka,
“Backlinks na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime usoro SEO dị mkpa. Na nke a, obere agbanweela kemgbe ọtụtụ afọ: saịtị nwere ọtụtụ backlinks na-akawanye mma. ”
Eziokwu bụ na ịde blọgụ ndị ọbịa ka bụ usoro ahịa azụmaahịa dị mkpa ma baa uru, mana ọ bụ naanị mgbe emere ụzọ ziri ezi.
O di nwute, ndi mmadu ka na-enwe oge siri ike ighota uzo ziri ezi iji gaa maka ikenye ndi ozo. N’agbanyeghi otutu ntuziaka ndi n’enye usoro iji mee nke oma, ha enwetabeghi ya. Ha na-eme otu ihe ugboro ugboro. Maka ndị na-erite uru karịa na enweghị atụ, lee ụfọdụ ụzọ na-ezighi ezi ndị mmadụ na-aga maka blọgụ ndị ọbịa.
Cha nkuku na Ogo
Njehie kachasị m hụrụ bụ na ogo ọdịnaya ndị mmadụ nyefere maka akwụkwọ ndị ọbịa ha ezughi oke.
N'agbanyeghị ebe ị ga-etinye ọdịnaya gị, ọ nwere aha gị na ya. Ọ na-anọchite anya akara gị, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ akara ngosi ihe atụ, ọdịnaya gị kwesịrị ịbụ ihe n exemomi. Laa azụ mgbe ndị mmadụ niile lebara anya bụ azụlink, ọdịnaya maka ihe ndị ọbịa na-ehichapụ site na igwe ihe ndị na-eme ihe na-enweghị isi iji zere ntaramahụhụ mbiputegharị.
Mgbe e bipụtara ụdị ọdịnaya a na saịtị nwere obere ekpughe, ọ nwere obere ohere iji mebie aha gị. N'oge a, ndị ọbịa gị kwesịrị ịrụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche maka gị. Tụkwasị posts ndị ọbịa gị na ụdị saịtị dị mma pụtara na ndị mmadụ ga-ahụ ha ma mepụta echiche banyere gị dabere na ihe ha gụrụ.
Họrọ Ebe Ọjọọ
Tupu Penguuin, omume ịde blọgụ ndị ọbịa anaghị elekwasị anya na ogo nke saịtị ahụ. Edere isiokwu na ugbo ọdịnaya na akwụkwọ ndekọ aha n'ihi na ihe niile dị mkpa bụ backlink. Post Penguin, saịtị ndị mere nke a na-ahụkarị ka a na-ata ha ahụhụ. Ọbụghị naanị na itinye na nsonaazụ ọchụchọ ahụ merụrụ ahụ, kamakwa echiche a dị mkpirikpi. Nchịkọta ndị ọbịa na-emepe ọnụ ụzọ maka ọtụtụ ohere ndị ọzọ gafere backlink.
Mgbe ebipụtara akwụkwọ ọbịa gị na saịtị nke a na-akwanyere ùgwù na ụlọ ọrụ gị ma nwee nnukwu obodo, akwụkwọ ozi ọbịa ga-emere gị ihe ole na ole:
Ọ na-eme ka a mata banyere atụmanya ndị nwere ike
Ọ na-eguzobe gị dịka ọkachamara ụlọ ọrụ / niche
Ọ na-ewulite ntụkwasị obi na ika gị
Otu saịtị nwere nnukwu obodo na-arụsi ọrụ ike nwekwara ohere ka ukwuu. Ndị na - agụ akwụkwọ nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya dị mma, ha nwere ike ịga na saịtị gị, na - abawanye okporo ụzọ ntụgharị ozi.
Nyochaa ogo nke saịtị nwere ike ime site na ịlele ọtụtụ usoro ntanetị saịtị. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịkwusa na saịtị nwere nnukwu okporo ụzọ, saịtị nwere ogo ogo Alexa ga-abụ ezigbo ebumnuche. Á »bá» will rá »If na á» ‹chá» rá »a saá» ‹tá» ‹nke ga-agafere tinyere á» SEO uru site na njiká », mgbe ahá» you á »‹ chá »rá» maka saiti na a elu ngalaba Authority. Dị ka o kwesịrị, ị ga-achọ ịgbalị ịgbalị ị nweta ọtụtụ saịtị. More na nke ahụ na ngalaba na-esote.
Enweghị Di iche
Otu n'ime nsogbu na backlinks bụ na ịnweta ha nwere ike akpaghị aka. Site na ntinye ederede, kwuo okwu na blọọgụ ndị ọzọ yana ọbụlagodi site na ntinye akwụkwọ ndị ọbịa. Iji chọta saịtị ndị na-adịghị ewu backlinks na ndammana, engines ọchụchọ na-achọ ihe ngosi dịka:
Over-kachasị kachasị arịlịka ederede
Onu ogugu adighi onu ahia nke dofollow ma e jiri ya tụnyere njikọ nofollow
A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ala àgwà njikọ
Ọbịa ikenye-enyere gị aka iru ọma na-njikọ njikọ profaịlụ. Blogfọdụ blọọgụ ga-enye gị ohere itinye njikọ na ahụ nke post gị, ebe ndị ọzọ nwere ike ịchọ ka ị tinye njikọ naanị na onye edemede gị. Zọ ọzọ iji gbanwee njikọ bụ ịgbanwe ederede arịlịka. Iji mkpụrụokwu na nkebi ahịrịokwu na-adịghị mfe-amata na uru uru isiokwu ga-eme ka ihe dị ka okike.
Usoro ọzọ bụ ịbịanye na blọọgụ ndị na-anọghị na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ niche, mana ha yitụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ mkpuchi, ịnwere ike ide akwụkwọ ndị ọbịa na blọọgụ ahụike na ahụike nke metụtara etu esi arụ ọrụ na ahụike nwere ike belata ụgwọ mkpuchi ndụ. Saịtị na-ere kọmputa nwere ike iru blọọgụ na-elekwasị anya na nchekwa kọmputa. Gbakwunye ozi ndị ọbịa na-abanye na pọtụfoliyo gị abụghị naanị na-enyere aka ịgbasa njikọ gị, mana ọ na - enyere gị aka igosipụta akara gị na ndị ọhụụ.
Ọbịa ikenye bụghị naanị na-enyere gị website; ọ nwere ike inyere gị aka ịme mmekọrịta siri ike na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ gị. Guo blọọgụ ịchọrọ ịrụ ọrụ ma zipụ ndị nwe ha nkwalite siri ike na arịrịọ ịde blọgụ ndị ọbịa.
Gwa ha ihe ichoro ide na otua si mara gi n’okwu a. Karịsịa, atụla ụjọ ịgwa ha ihe mere ịchọrọ ide maka saịtị ha. Ime ihe n'eziokwu na-eme ka ha mata na ị naghị anwa ịme egwuregwu ahụ, kama ị na-ewulite azụmahịa gị ma na-enye onyinye nke ha.
Tags: imepụta ọdịnayablogging ọbịablọgụ ndị ọbịa kacha mmaPenguin melite
Kedu ihe mpempe pụrụ iche. Ịde blọgụ ndị ọbịa nwere ike ịbụ ụzọ magburu onwe ya isi mee ka echiche gị dịkwuo elu n'ime ubi gị… ma ọ bụrụ na ị maara otu esi eme ya nke ọma. Daalụ maka ndụmọdụ!
Na-aghọta ihe. Blọọgụ anyị na-anabata ozi ndị ọbịa ugboro ugboro, mana anyị siri ike na mma na njikọ azụ. Olileanya, nlebara anya na àgwà ga-egbochi anyị ka anyị ghara ịdị ka ihe ọ bụla ọzọ karịa ihe anyị bụ: blọgụ na-agbalị ịnye uru maka ndị na-agụ akwụkwọ anyị.
Chọta otu niche nke ịchọrọ ịga wee chọta saịtị ndị ziri ezi. Ndụmọdụ dị mma. Echere m na ndị mmadụ nwere ike inwe uto ọjọọ n'ọnụ ha ugbu a ụbọchị banyere ịde blọgụ ndị ọbịa n'ihi na ị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-achọ naanị ịnweta ebe ọbịa ka ha nwee ike ịme blọgụ ha jupụtara na njikọ. Ndị mmadụ na-achọ nnukwu ozi, ọ bụghị njikọ, ma ọ bụrụ na ị na-enye nnukwu ọdịnaya ndị mmadụ nwere ike ịchọ gị na agbanyeghị.
Kwekọrịtara! Anyị na ndị backlinkers na-alụ ọgụ na-agbalị ịbanye na saịtị anyị mgbe niile. Anyị amalitela nofollow njikọ niile na posts - nke ahụ na-enyere aka.
Enwere m nnukwu oge ịgụ akwụkwọ ozi gị Larry… Daalụ maka ịkekọrịta!
Ezigbo ndụmọdụ Larry. M na-agbakwa mbọ hụ na opekata mpe nwere posts iri na abuo na blọọgụ m tupu m amalite ịde blọgụ ọbịa n'ike. Ihe ọ bụla na-erughị nke ahụ ga-apụta na ndị na-agụ akwụkwọ m na-adọta site na blọọgụ ndị ọzọ ga-apụ na-enwe nkụda mmụọ ma ghara ịlaghachi ọzọ.
Ndụmọdụ dị egwu! Ọ na-eju anyị anya ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akwalite saịtị ha dị ka onye nzuzu… na enweghị ozi ma ọ bụ ohere ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ mgbe ndị folk rutere ebe ahụ!